abandoned mansion england — Latest Urbex Reports — Urbex: Darbians Photography
Abandoned: Heckington Manor/ Ferdowse Clinic →
A large abandoned town house last used as an alcohol rehabilitation clinic.
In abandoned, decay, derelict, HEALTHCARE, hidden beauty, LARGE RESIDENTIAL, Lincolnshire, urban ex, urban exploration, urban exploring, urbex Tags abandoned, abandoned england, abbandonata, urbex, ue, uk, uk urbex, urban explorers, urban ex, urban exploring, urban decay, urban explorer, urban exploration, 2016, abandoned mansion england, england, derelict england
Abandoned: Doughty House →
A beautiful abandoned town house set on Richmond Hill, with stunning views.
In LARGE RESIDENTIAL Tags 2016, abbandonata, abandoned, abandoned england, abandoned UK, derelict, derelict hotel, decay, decayed, decaying, urbex, ue, uk, uk urbex, urban explorers, urban ex, urban exploring, urban explorer, urban exploration, urban decay, london, abandoned mansion england, england, urbex england
Abandoned: Woolton Hall AKA Katies House →
What was once a grand manor is now left abandoned after some crazy internal renovations.
In UK, LARGE RESIDENTIAL, 2014 Tags 2014, lancashire, england, derelict england, urbex england, abandoned mansion england, abandoned england
Abandoned: Pothole Manor →
A delightful abandoned manor house set on a hill in the UK.
In UK, LARGE RESIDENTIAL, 2014 Tags 2014, abandoned mansion england, abandoned england
Abandoned: Crookham Court School →
A large manor house with a sordid history in the UK.
In UK, LARGE RESIDENTIAL, EDUCATION, 2013 Tags abandoned, urban exploration, urban ex, uk, urban explorer, urban exploring, abandoned england, abandoned UK, urban decay, uk urbex, urbex, abandoned places, urban explorers, 2013, hampshire, them stairs though, abandoned mansion england